कांग्रेस सभापतिमा देउवा र कोइरालामा कस्ले मार्लान बाजी ? निधि र सिंहमाथी बिकेको आरोप ! – Mission Khabar
कांग्रेस सभापतिमा देउवा र कोइरालामा कस्ले मार्लान बाजी ? निधि र सिंहमाथी बिकेको आरोप !
मिसन खबर २८ मंसिर २०७८, मंगलवार २२:४५
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको सभापतिका लागि भएको दोस्रो चरणको मतदान सम्पन्न भएको छ। राति ९ बजे मतदान सकिएको र अबको केही समयमा गणना सुरु हुने निर्वाचन समितिले जानकारि दिएको हो । समितिले पहिलो चरणको भन्दा ११५ मत कम अर्थात ४ हजार ५६२ जनाले मात्रै दोश्रो चरणमा मतदान गरेको जानकारि दिएको छ ।
कांग्रेसका ४ हजार ७४३ महाधिवेशन प्रतिनिधि रहेकोमा पहिलो चरणमा ४ हजार ६८१ जनाले मात्र मतदानमा सहभागिता जनाएका थिए । दोस्रो चरणमा अझ कम महाधिवेशन प्रतिनिधिले मतदान गरेका छन् । सोमबार भएको मतदानमा सभापतिका ५ उम्मेदवार मध्ये कसैले पनि कांग्रेस विधानको व्यवस्था अनुसार ५० प्रतिशतभन्दा धेरै मत नल्याएपछि आज पुनः सबैभन्दा धेरै मत ल्याउने दुई उम्मेदवारबीच प्रतिस्पर्धा भएको थियो । सबैभन्दा धेरै मत ल्याउने शेरबहादुर देउवा र डा शेखर कोइराला दोस्रो चरणमा प्रतिस्पर्धा गरिरहदा दुबैले आफू जित्ने निश्चित भएको दाबी गरेका छन् । पहिलो चरणमा सभापतिका प्रतिस्पर्धी रहेका प्रकाशमान सिंह, विमलेन्द्र निधि र कल्याण गुरुङ लाई आफ्नो पक्षमा ल्याउन सफल भएका देउवा आफु जित्नेमा थप ढुक्क छन् ।
यस्तो छ मतगणनाको तयारी
मंगलबार राति ११ बजेपछि सभापतिको मतगणना हुनेछ । यसपछि अन्य पदका लागि भएको मतदानको गणना हुने बताइएको छ । १३४ सिट मध्ये २ जना केन्द्रीय सदस्य निर्विरोध निर्वाचित भइसकेका छन् । १३२ सिटका लागि भएको मतदानको गणना भएको छैन, सभापतिको मतगणना सकिएपछि बुधबार एकदिन आराम गरेर बिहिबारबाट बाँकी मतगणता कांग्रेस पार्टी कार्यालय सानेपामा हुने निर्वाचन समितिले जानकारी दिएको छ । कांग्रेस महाधिवेशनको सम्पूर्ण नतिजा आउन करिब एक साता लाग्ने आँकलन भैरहेको छ ।
नेतृत्व परिवर्तन र रुपान्तरको वकालत गर्ने सिंह र निधि किन देउवाकै पक्षमा ?
देउवाबाट पार्टी उँभो नलाग्ने निस्कर्षमा पुगेका प्रकाशमान सिंह र विमलेन्द्र निधिलाई सत्ता राजनीतिका माहिर खेलाडी देउवाले आफ्नो पक्षमा पार्न सफल भएको बिषयलाई चासोकासाथ हेरिएको छ । यो गठजोडमा लेनदेनको सम्झौता भएको आशंका समेत गरिदैछ । प्रकाशमानलाई उपप्रधानमन्त्री बनाउने वचन दिइएको, परिआए गृहमन्त्रालय नै सिंहलाई छाड्न आफू तयार रहेको खाणले समेत आश्वासन दिएको बताइएको छ । यस्तै महाधिवेशनपछि विधान संशोधन गरेर महिला उपसभापतिको व्यवस्था गर्ने र सिंहको टिमबाट उपसभापति लडेकी सुजाता कोइरालालाई विधान संशोधनपछि महिला उपसभापति बनाउने सहमति बनेको बताइन्छ । साथै रिक्त रहेको उद्योग,वाणिज्य मन्त्रीका रुपमा सुजातालाई वचन दिइएको देउवा निकट श्रोतको दाबी छ ।
मधेशमा निधिको प्रभाव जोगाइदिने र उनकै विश्वास पात्रलाई प्रदेश २ को सभापति बनाउने वाचा सभापतिमा दोहोरिन देउवाले गरेको चर्चा भैरहेको छ । विश्वप्रकाश शर्मा र कल्याण गुरुङलाई केन्द्रीय राजनीतिबाट ओझेल पर्न नदिने वाचा समेत देउवाले गरेको पाइएको छ । दुवैलाई केन्द्रीय सदस्यमा ल्याउने र उपयुक्त भूमिका दिने आश्वासनपछि देउवाले कोइराला पक्ष बाहेक सबैको साथ पाएका छन् । यद्यपी महाधिवेशन प्रतिनिधिहरु भने नेतृत्व परिवर्तनको वकालत गर्ने शिर्ष नेताहरुको गठजोड भन्दामाथी उठेर आफूहरुले विबेक प्रयोग गरेको दाबी गरिरहेका छन् ।